Nin lagu ganaaxay xawaaraha wadida gaari – Radio Muqdisho
Nin heysa dhalasha Britain ayaa Dubai ugu xanniban lacag dhan 46,000 oo ganaax gaari wadid ah
Qoyska ninka ayaa sheegay in wiilkoodu dalxiise ahaa o lagu qasbay in uu Dubai sii jooga ka dib markii xawaaraha gaari uu waday awgeed loogu ganaaxay 46,000 oo doolarka Maraykanka ah.
Faarax Xaashi oo 25 jir ah ayaan awoodin in uu iska bixiyo ganaaxaas, walaalkii sida uu u sheegay BBC
Shirkada uu Xaashi ka kiraystay gaariga Lamborghini Huracán ayaa wargeyska The National u sheegay in ay ka sii hayeen baasaboorkiisa ,walaalkii Adman oo 50 jir ah ayaa sheegay in baasaboorkiisa laga qaaday Faarax ka dib markii uu shirkada ka kireystay gaarigan oo lagu qiimeeyo 155,000 ee gini.
Xaashi ayaa la sheegay in uu jabiyay xeerkii xawaaraha ee u dajisnaa mid ka mid ah waddooyinka ugu mashquulka badan Dubai, isga oo waliba tobannaan jeer khaladkaas ku celceliyay saacadihii hore ee Talaadadii.
Ganaaxa guud ayaa noqday 175,000 oo dirham oo u dhiganta $47,600 doolarka Maraykanka ah.
Wuxuu jabiyay xeerkii xawaaraha ee waddada Sheikh Zayed Road isaga oo gaariga ku kaxeeyay 240km saacaddii.
Adman Xaashi ayaa sheegay “in ay huteelka ugu yimaadeen ayna waydiisteen baasaboorkiisa ka dib markii uu u soo dhacay tikitka ganaaxa, uuna sidaa ku bixiyay baasaboorkiisa isaga oo cabsanaya.
“Hadda waxay leeyihiin waxaa waajib ah in uu bixiyo 40,000 oo giniga istarlinka ah waana arrin qaab daran. Ma haysto lacagtaas. Shaqo la’aan ayuu ahaa, Dubai wuxuu ku booqday saaxiibbadii.
Nabad diidka Al-Shabaab oo Degmada Xarar-dheere ku xiray Waxgarad kasoo horjeestay amarro ay soo saareen